के पानीनै बाराबार छन् त कट्रिना र दीपिका ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood के पानीनै बाराबार छन् त कट्रिना र दीपिका ?
के पानीनै बाराबार छन् त कट्रिना र दीपिका ?
कट्रिना र दीपिकाको सम्बन्ध पानी बाराबारको छ । उनीहरुको शीतयुद्ध बलिउडमा कतैबाट लुकेको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार फिल्म ‘पद्यावत’का कारण यतिबेला दीपिका पादुकोण चर्चामा छिन् । तर, त्यो चर्चालाई ओझेल पार्ने अर्को प्रसंग जोडिएको छ । त्यो हो, कट्रिनासँगको उनको दुश्मनी । हालै दीपिकाले आफ्नो बिहेमा कट्रिनालाई नबोलाउने सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि यतिबेला उनीहरुवीचको दुश्मनी सतहमा देखिएको छ ।
दीपिका र रणवीर सिंह प्रेम सम्बन्धमा छन् । उनीहरुले यसै बर्ष बिवाह गर्ने हल्लीखल्ली पनि छ । यसै मेसोमा एक अन्र्तवार्ता दिँदै दीपिकाले भनेकी छिन्, ‘म आफ्नो बिहेमा कट्रिना कैफलाई निम्तो गर्ने छैन ।’
विश्वकै चर्चित र महंगो रियालिटी शो ‘द भ्वाइस’ अब नेपालमा
अब फेरी रोमान्स गर्दै यी पूर्व प्रेमी प्रेमिका